Odessa National Maritime University - Study muUkraine
Odessa anonzi "GUNGWA Gedhi RUDZI". Uye gedhi chero rinotarisirwa kuvhura. With kuti vavarira mupfungwa 80 Makore apfuura ipapo rakavambwa "Vodniy Institute" - Water Transport Institute - kupfuura zvomumvura uye kupfuura Odessalike ose.
Odessa National Maritime University (ONMU) sangano rine ichiita mabasa akawanda yedzidzo, izvo anogadzirira vadzidzi vose educationalqualifying siyana (jaya, nyanzvi, tenzi) nokuti azere kwerunyararo yevashandi zvinodiwa kuti nepagungwa uye rwizi bazi.
It kwakatangwa June, 12 1930 sezvo Odessa Institute of Water Transport Engineers. In May 1945 Institute ainzi sezvo Odessa Institute of Marine Fleet Engineers. mu 1994 Institute Yakazopiwa zita rokuti kupinda Odessa State Maritime University.
Kufunga National uye dzakawanda kukosha migumisiro University basa raMwari uye mupiro rayo rinokosha kupinda kukura redzidzo nesayenzi, Yunivhesiti akanga with National chinzvimbo kubudikidza chirevo President rweUkraine musi February, 26 2002.
The ONMU iri pasi zvakananga kuzviisa pasi pamusoro Bazi Science jecha Education rweUkraine uye vakawana IV-Th (kumusoro-soro) Hazvizivikanwi accreditation.
mu 2003 ari ONMU zvapedza advertising kuti dzakawanda yepamusoro utariri nehurongwa ISO 9001: 2000.
The University ndiyo nhengo European Association of Africa (MVURA), South East European Association of Transport Researches (SETREF), International Association of Maritime University (IAMU), uye Magna Charta Universitatum. The ONMU ndiye Murongi Mudare University Network of Central European Initiative (CEI) muUkraine.
kubva 1995 ONMU vaiitawo Trans-European Programs kuti Cooperation (TACІS -Tempus) uye CEI Programmes.
Odessa National Maritime University akadzidzisa tsvimbo zvahwaiita mugungwa indasitiri kuti dzimwe nyika kubva 1950. Nokuti iyi kwave akagadzirira kudzidza kuti 90 Nyika Europe, Asia, Africa uye Latin America.
Chimiro University inosanganisira 7 mano ayo gadzirira vanachiremba pamusoro 12 unyanzvi uye aite kudzidzisazve pakati vashandi.
Nzira nokuda kuziva zvinodiwa wokumwe yedzidzo
With chinangwa implementation ari mamiriro inokosha nzira kusangana dzidzo yenyika munzvimbo dzakawanda rokudzidzisa zvakatipoteredza, rwenzirayekufambisa Yedzidzo kufamba sezvo nzira yokuparadzira zvedzidzo tsika dzidzo, Hurumende rweUkraine chagamuchirwa zviri 2000 Chibvumirano musi Kukosheswa Vangapinda Yepamusoro Dzidzo iri European Region (Lisbon, 11 Kurume 1997).
saka, mamiriro ezvinhu pamutemo tinyatsonzwisisa yokumwe certificate pamusoro dzidzo iri nokudzorwa zvokudya yekunwa gwaro, uye Zvinotarisirwa ari Second Session of Committee of Lisbon Convention Committee musi Recognition (Riga, 6 Chikunguru 2001), nhengo chiri mumiririri Ukraine - mukuru weDhipatimendi kutyora uye accreditation Ushumiri of Education uye Science rweUkraine, Mr. Gogita Ivanovych Domnich.
nyatsoshanda (pachena, chaicho, siyana nezvimwe, zvaunoda, Yokudzidza, otomatiki) misimboti dzekuziva zviri kukoshesa vatorwa zvinodiwa zvakasanganiswa nezvepanyika zviri zvikuru bilateral dzakawanda zvibvumirano pamusoro dzekuno pamutemo uye equivalency magwaro pamusoro dzidzo uye zvedzidzo pamisara, pursuant icho kutsunga wakanyatsojeka dzinowanzotsigi- unovimbisa vaya chiratidzazvizhinji magwaro, izvo pamutemo vanotenderwa (toredzerwa) nokuda hurumende.
saka, muitiro womunhu yakawiriranwa kuziva zvinodiwa edzidzo ari nokudzorwa kuUkraine pamwe 14 inoti, kusanganisira: Republic of Estonia, Republic of Uzbekistan, Republic of Belarus, muHungary Republic, Vanhu vaJehovha Republic of China, Romaniya, ari Slovak Republic, Republic of kuAzerbaijan, yokuRussia Federation, Republic of Armenia, Republic of Bulgaria, Republic of Moldova, Tekimenisitani, Republic of Kazakhstan.
Nzira kuti kuziva zvinodiwa wavatorwa yedzidzo inofanira kuteererwa Bazi Education uye Science rweUkraine, zvinoti, nokuda dhipatimendi rimwe kutyora uye accreditation, apo vamhan'ari kana vavo mvumo vanhu pasi magwaro avo dzidzo nekuda kuzivikanwa.
Zvinyorwa zvose vakabvuma kuti kufunga kuti kuziva zvinodiwa edzidzo chigamuchirwe, chero kuti vave inonyoreswa kubudikidza mitumbi Bazi Foreign Affairs rweUkraine uye pamwe chete kwavo notarized makopi uye shanduro.
Venhema 'zvikumbiro kuzivikanwa inofanira kukurukurwa munhu hwaro mukati kwenguva isingadariki mwedzi mina kubva musi okutambirwa anodiwa mashoko ose.
Ndandanda magwaro kuti vakabvuma kuti kuziva zvinodiwa edzidzo anofanira anosanganisira:
kushandisa munhu anoedzesera nokuti kuzivikanwa, kuti vanofanira kutaridzwa chinangwa kuzivikanwa, uyewo kuziva nzira nokuda nedanho kuzivikanwa;
yepakutanga uye kopi gwaro iri dzidzo;
yepakutanga uye kopi okuwedzera gwaro iri dzidzo chaiyo ndandanda nyaya uwandu maawa pakudzidza, chokupedzisira giredhi, mazita dzinoshanda mabasa, izwi uye akapedza kudzidza mapepa, zvimwe zvinoumba yedzidzo muitiro;
shanduro akati zvinyorwa mumutauro mamiriro;
chionekeso pamusoro kuripwa kukosha zvinofanira kuzivikanwa zvinodiwa dzidzo.
Kuwedzera yokuendesa magwaro, Bazi Education uye Science rweUkraine achawana pamusoro kudiwa kubva nomazvo simba mashoko ari mamiriro sangano yedzidzo, kuti akapa kodzero, uye, kana zvakakodzera, pamusoro nderechokwadi issuance magwaro.
Apo dzinoongorora vatorwa zvinodiwa, kuisa ichapiwa migumisiro dzidzo, kunaka syllabus, uye nguva yose dzidzo. Zvinofungidzirwa, kuti kanenge 75% of nenyanzvi ukama vanotongwa nepurogiramu yokurovedza ari wokumwe zvinodiwa zvinofanira vanobvumirana, kubudikidza ndandanda uye yezvinoreva kudzidza kwemaawa, pamwechete mamiriro zvinodiwa zviri uye yezvinoreva kurovedza redzidzo uye nyanzvi zvinoshanda muUkraine. Zvichaitwa akaonekwa zvinobvira vanoziva yokumwe zvinodiwa sezvo kururama pamwe National munhu, Zvisinei kwete kuti kushandiswa ne munhu anoedzesera, asi kunyanya pedyo zviri syllabus.
Nokuti paruzivo chisarudzo charo pakuziva, Bazi Education uye Science rweUkraine vachabva gwaro iri muchimiro kutsunga neShumiro Education uye Science rweUkraine.
In zvinoitirwawo chisarudzo kunaka, Bazi Education uye Science rweUkraine anofanira kuzivisa vamhan'ari nokuda kuziva zvikonzero zviri kuramba kubvuma zvinodiwa dzidzo, uye anofanira kupa mashoko ane chokuita matanho kutorwa navo kuti vagamuchire kuzivikanwa zvakadaro pashure.
Mutongo reBazi Redzidzo uye Science rweUkraine pamusoro kuramba kubvuma yokumwe zvinodiwa vanogona akashora pursuant kuti kurapa yakapiwa nokuti mitemo zvinoshanda.
Last update:25 Kurume 19